ဒေသတွင်းရှာဖွေမှုကြီးထွားလာနေတယ်၊ ​​မြေပုံပေါ်မှာတောင်ရောက်နေပြီလား။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 1, 2009 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 23, 2015 Douglas Karr
သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာသို့ရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်များစွာအလုပ်များနိုင်သည်။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမခံစားရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည် Google ကဒေသခံစီးပွားရေး။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် Indianapolis ကော်ဖီဆိုင်, The Bean Cup၊ ကောင်းသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုကိုရယူရန်။ သို့သော်ပထမအဆင့်မှာသူတို့ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင်စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်လုပ်ပါက Google ပေါ်တွင်ရှာဖွေပါ ဘို့ Indianapolis ကော်ဖီဆိုင်, မည်သည့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမတိုင်မီ Indianapolis ရှိဒေသခံကော်ဖီဆိုင်အားလုံးနှင့်အတူမြေပုံပေါ်လာသည်။
ဤမြေပုံကိုရယူခြင်းသည်လူကြိုက်များခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Google Local Business အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စသာဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးတွင်သင်၏တည်နေရာကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်သင့်အားလူကြိုက်များသောဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်ကိုမြေပုံပြသည့်နေရာတွင်ထည့်သည်။ Google မြေပုံရှာဖွေမှုများနှင့်အတူမြေပုံ.
ဓာတ်ပုံများ၊ ကူပွန်များ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လည်ပတ်ချိန်များစသည်တို့ကိုတင်ခြင်းအမြောက်အမြားလည်းရှိသည်။ အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်တော်တော်လေးရိုးရှင်းသည်။ ဂူဂဲလ်ကသင်သေချာစေရန်သင်၏ဖြည့်ထားသောစီးပွားရေးနံပါတ်သို့အလိုအလျောက်ဖုန်းခေါ်သည်။ အစစ်အမှန် သင့်တွင်အလိုအလျောက်ဖုန်းစနစ်ရှိပါကသင့်အားအတည်ပြုကဒ်တစ်ခုပို့ရန်ဂူဂဲလ်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ကဒ်လက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးအတည်ပြုကုဒ်ကိုထည့်ပါ။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင်၏စီးပွားရေးကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ပါ ဒီနေ့ ငါကအခမဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သလား
Tags: ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးမြေပုံများဂူဂဲလ်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးမြေပုံ googleဂူဂဲလ် + ဒေသတွင်း
မတ်လ 25, 2010 မှာ 11: 20 AM
ဒါက ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။ ၎င်းသည် သင်၏ ဦးဆောင်သူများနှင့် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များ သွားရန် ၎င်းတို့ကို စောင့်မျှော်နေသော သင်ရောက်ရှိနေသည့် ခံစားချက်ကို ပေးသည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏ထိပ်တွင် သင့်လုပ်ငန်းကို ထားရှိပြီး ရလဒ်တစ်ခုထက်ပို၍ သင့်ဖောက်သည်များအပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ သင့်လင့်ခ်ကို နှိပ်ရန် သူတို့သံသယရှိမည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ် အကြံဉာဏ်များကို ရှာဖွေပြီး Startups.com တွင် စကားဝိုင်းများ ပါဝင်ပါ။